XISBIGA KULMIYE OO QORALO CABASHO AH U KALA DIRAY HAYADAHA DAWLADA EE AY KUSAYSO | Toggaherer's Weblog
BUDHCAD BADEED QAFAALATAY MARKAB LAGA LEEYAHAY GREECE.
XISBIGA KULMIYE OO QORALO CABASHO AH U KALA DIRAY HAYADAHA DAWLADA EE AY KUSAYSO
Kulmiye oo Qoraalo cabasho ah u gudbiyey Xukuumada, Golayaasha Qaranka iyo Axsaabta Qaranka.
Xisbiga Kulmiye ayaa maanta waxa uu soo saaray qoraalo uu ku cadaynaayo dhibaatida lagula kacayo xisbiga kulmiye taasoo ay quraalo u kala direen Hay’adaha kala duwan dawlada ee ay is lahaayeen way kusaysaa qoraakoodani kana dalbaday in sida ugu dhakhsaha badan wax looga qabto.
Arrimaha uu ka hadlay maanta waxaa ka mid ah Xubin ka mid ah taageerayaasha Xisbiga Kulmiye oo ah Madax-dhaqameed maanta Ciidamada Boolisku ku xidheen Magaalada Hargaysa iyo qof la sheegay inaanu ka mid ahayn Taageerayaasha Xisbiga Kulmiye oo xaflad shalay xisbigu lahaa ka dhex riday rasaas.
Qoraalkii ay kala direen xisbiga kulmiyena waxa uu u dhignaa sida tan
KU: Taliyaha Ciidamda Booliska JSL Hargeysa
OG: Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha S/L
OG: Xeer-Ilaaliyaha Guud ee Qaranka JSL Hargaysa
OG: Golaha Wakiilada JSK Hargaysa
OG: GolahaGuurtida JSL Hargeysa
OG:- Xisbiga Qaran Ucid Hargaysa
OG: Xisbiga Qaran UDUB Hargaysa
Ujeedo:- Xidhiga Madaxda Kulmiye
Waxaa saaka oo bisha April aheyd 14, 2009 laga qabtay Huteel Imperial Suldaan Sulaiman Boqor Cusman Xasan, iyadoo loo gudbiyey Xarunta Ciidamda Denbi Baadhista ee C.I.D. ee Hargeysa. Ilaa iyo hadda ma jiraan wax warar rasmiya oo ku saabsan xidhiga Suldaanka, haseyeeshe waxaa la sheegayaa inay ka danbeeyaan xidhigiisa masuuliyiin ka tirsan Xisbiga UDUB oy kamid yihiin Saciid Sulub, Cawil Cali Ducaale iyo Cali Maxamed Wararn Cadde.
Dhacdani ma aha tii ugu horreysay ee noocaniya ee waxaa ka horreeyey in isla todobaadkan amar kasoo baxay masuul ka tirsan Xisbiga UDUB uu amar ku siiyey Xeer Ilaalinta Ciidamada inuu dacwad kusoo oogo Dr. Maxamed Cabdi Gaboose, lana horkeeno maxkamada ay khusayso, wuxuuna eedayntaasi sabab uga dhigay masuulkaasi iyadoo ay madax ka tirsan Xisbiga Kulmiye uuna hoggaaminayey Guddoomiyaha Xisbiga Kulmiye Md. Axmed Maxamed Siilaanyo oo ay weheliyaan Guddoomiye Ku-Xigeenka Golaha Wakiilada Md. Baashe Maxamed, Dr. Maxamed Cabdi Gaboose iyo Jamaal Caydiid ay booqasho ugu tegeen Talisyada Ciidamda Qaranka iyo Booliska halkaaso ay kula kulmeen labada Taliye ee labada ciidan.
Waxayna labada geesood ka wada hadleen ilaalainta xassiloonida iyo nabadgelyada dalka iyo sidii la isaga kaashan lahaa.
Waxaa sidoo kale weeraro lagu qaaday xafiisyada Kulmiye ee magaalooyinka Hargeysa, Berbera iyo Burco halkaasoo waxyeelo iyo xidhigba loogu geestay qaar kamida masuuliyiinta Xisbiga ee magaalooyinkaasi. Waxaa kaloo rasaas ciidamada Boolisku ku fureen todobaadkii hore Guddoomiyaha Xisbiga Md. Siilaanyo iyo taageerayaal la socda oo socod ku maraya wadada u dhexaysa Xarunta Xisbiga iyo Guriga Guddoomiyaha, iyadoo la xaqiijinayo in rag kamida ciidanka Booliska ay isku dayeen inay toogtaan Guddomiyaha Xisbiga Md. Siilaanyo.
Waxaa kaloo falalkaasi xaqiijinayaan in mar labaad shalay oo bishu aheyd 14 April 2009 la isku dayey in la toogto madaxda Xisbiga Kulmiye kadib markii uu nin aan taageerayaasha Kulmiye ka mid aheyni rasaas baastoolad ku riday taageerayaasha Kulmiye mar ay isu soo bax ka sameynayeen Xarunta Dhexe ee Xisbiga.
Xisbiga Kulmiye wuxuu mar walba mudnaanta kowaad siinayaa ilaalinta nabbada iyo xassiloonida, wuxuuna mar walba kasoo horjeeda wax kastoo waxyeelo u gaysanaya midnimada iyo wadjirka ummdadda.
Sidaasi daraadeed wuxuu Xisbiga Kulmiye u tilmaamayaa hay’adaha ku shuqulka leh ilaalinta nabadgelyada khatarta ka iman karta weerarada sharci darroda ah ee lagula kacayo madaxda iyo taageerayaasha Xisbiga Kulmiye, wuxuuna ku boorinayaa inay ka qaadaan tallaabo sharciya ciddii wax u dhimaysa nabbada iyo wadajirka ummadda.
KEYSE XASAN CIGE
UJEEDDO: WEERAR HUBEYSAN.
Waxaa manta oo bishu tahay April 13, 2009, ahna maalin Isniin ah , abbaaro 11:45 subaxnimo, lagu rasaaseeyey Xarunta Xisbiga Kulmiye Madaxda iyo Taageerayaasha Xisbiga , halkaas oo ay isugu soo baxeen Madaxda iyo taageerayaasha si ay u muujiyaan ra’yigooda ku saabsan saluugga maamulka Xukuumadda Riyaale ee waqtigeedi dhammaaday 6dii April 2009, iyo dib u dhaca sharci-darrada ah ee loogu kordhiyey mudada lixda bilood ah.
Waxaana goobtaasi khudbado ka jeedinayey Hoggaanka Xisbiga, Xildhibaano iyo Madax kale oo ka socotay Golaha dhexe ee Xisbiga Kulmiye, Urur-siyaasadeedka Qaran, Guddiga joogtada ah ee Golaha Guurtida iyo Madax-dhaqameedyo. Intii ay socdeen khudbadahaasi waxaa mar walba rabshado iyo qalaanqal ka dhex-waday madasha dad si gaara loo soo abaabulay oo loogu talo-galay inay khalkhal geliyaan isu soo baxa Kulmiye.
Waxaana ugu danbeyntii ay rabshadaasi dhalisay in nin aan ka mid ahayn taageerayaasha Xisbiga Kulmiye, oo magaciisana lagu sheegay MAXAMED XUSEEN KHALIIF, uu rasaas ka dhacaysa bistoolad uu oodda kaga qaaday taageerayaashii Xisbiga ee goobta joogay, hase-yeeshee aanay cidina waxba ku noqonin.
Kadib, markii daba-gal arrintaas lagu sameeyey , waxaa noo caddaatay in ninkani loo adeegsaday in uu dilo qaar ka mid ah Hoggaanka Xisbiga Kulmiye , si loo abuuro xaalad colaadeed iyo Nabadgelyo darro, laguna shaabadeeyo Xisbiga Kulmiye. Hase-yeeshee , taasi may dhicin, oo waa laga badbaaday, kadib markii ay iska caabiyeen taageerayaasha Xisbiga KULMIYE, waxaana la xaqiijinayaa inuu Bastoolada lahaa nin ka tirsan CIIDANMADA MADAXTOOYADA, oo isla markiiba kala wareegay ninkaasi Bistooladii, kuna ritay galkeedii oo uu isagu xidhnaa, si degdeg ahna uga carraray goobtii ninka lagu qabtay.
Ninkaas Bistooladda adeegsaday waxaa loo taxaabay Xarunta C.I.D-da ee Hargeysa, sida aanu ku helay wararka.
Hadaba, waxaanu ka codsanaynaa Ciidamada Nabadgelyada:
1. In si deg deg ah loo horkeeno dambiilaha sharciga.
In arrintani baadhitaan lagu sameeyo, inuu ka dambeeyo Gudoomiyaha Gobolka Maroodi/Jeex Cali Xasan Maxamed ( Cali Asad) oo loo aanaynayo inuu ka dambeeyo arrintani.
In la soo qabto askariga u dhiibay Bastooladdiisa danbiilaha , isla markaana sharciga la hor-keeno.
Inay Madaxda Ciidamada Nabadgelyadu qoraal ugu soo gudbiyaan Hoggaanka Xisbiga tafaasiisha mu’aamaraadkani ee loo soo maleegay Madaxda iyo Taageerayaasha Xisbiga Kulmiye.
Waxaan aad ugu rejoweynahay in aydin si deg deg ah wax uga qaban doontaan.
WADA SHAQEYN WACAN
KEYSE XASAN CIGE XOGHAYAHA GUUD